Lignano — Weather ny volana, rano mari-pana
World Resorts Firenena Italia Lignano
Eo ho eo isan'andro ny mari-pana ambony indrindra — 30°C Aogositra. Eo ho eo ny mari-pana ambony indrindra alina — 19.2°C Aogositra. Eo ho eo isan'andro, fara fahakeliny, ny mari-pana — 7.1°C in Janoary. Ny eo ho eo, fara fahakeliny, ny alina mari-pana — 2.8°C in Janoary.
Eo ho eo ny mari-pana ambony indrindra ny rano — 25.9°C raikitra Aogositra. Eo ho eo, fara fahakeliny, ny mari-pana ao anaty rano — 9.1°C raikitra Février.
Maximum rotsakorana — 133.2 mm ny Dia noraketina Novambra. Minimum rotsakorana — 54.1 mm ny Dia noraketina Aogositra.